Vh Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Vh Forex Tusiyaha
Vh Forex Tusiyaha
Vh Forex Tusiyaha waa mid ka mid ah tilmaanta ugu faa'iido qaadashada in aad ku arki doonto suuqa maanta.
tilmaame wuxuu ku salaysan yahay ka celceliska dhaqaaqin. Marka uu qof ka dhaqaaqo celceliska waxaa laga yaabaa inaad dhiiran tahay in mar walba milicsato dhaqaaqin tilmaame celceliska laakiin celceliska dhaqaaqin dhab in ay yihiin, ee celceliska ah ee qiimaha firfircoon / abid-beddelo suuqa halkan ka guuraan / isbedel. Tilmaamahan waa tilmaame caado la keliya ku salaysan celceliska dhaqaaqin.
Iyada oo tilmaame Vh ah, waxa ay awoodaan in ay isticmaalaan celcelis ahaan inay dhaqaaqaan in la saadaaliyo ama tilmaamaya dhaqankan cusub ee qiimaha suuqa. Waxaa loo qaabeeyey si ay u muujiyaan xitaa isbedel yar in dhaqankan cusub ee qiimaha suuqa.
Sidee u shaqeeyo.
tilmaame Vh waxaa loogu talagalay in ay curiyaan line a joogto ah in soo socota qiimaha suuqa. Tani line joogto ah waa line ah celceliska ah. line waxaa laga sameeyey oo dhibco yaryar oo ka mid ah waxaa laga yaabaa in Bleu ama cas.
The qaybta line dhibcaha cas muujinayaa hoos u dhaca qiimaha suuqa halka qaybta buluuga ah dhibcaha laynka oo muujinaya isbeddel sii weynaydba qiimaha suuqa.
tilmaame wuxuu qaadanayaa waqti qaar ka mid ah si ay u muujiyaan isbedel qiimaha ka, oo waxaa loogu talagalay si si wax looga qabto dhibaatada calaamadaha been ah. Haddii aad is geliso tilmaanta gal shaxda ganacsi aad waxaad arki doontaa in tilmaanta muujinaya isbeddello ah intii ka ama hoos u suuqa ka dib markii suuqa ayaa hore u kacay ama hoos u kala horreeyaan by qaar ka mid ah laambadihii / baararka.
lagugu tuday sawirka.1. tilmaame Vh The sharaxay.
Si kastaba ha ahaatee, haddii calaamadaha tilmaanta waa isbeddel hoos u dhaca qiimaha suuqa a, ka dibna qiimaha suuqa doonaa sii hoos u dhaqaaqin ilaa tilmaanta ka duwan uu leeyahay iyo qeybsanaan ku xigeenka.
Isticmaalka tilmaame Vh in ay meel iyo amar ku dhow.
Signalada waxaa la siiyaa by isbedelka midabka inta u dhaxaysa casaan iyo buluug!
Bal aan ka bilowno gelinayn amarada; a booska iibsan / si la dhigayaa marka line tilmaanta u jeestaa buluug ah, halka a booska iibiyay / si la dhigayaa marka line tilmaanta u jeestaa cas. Inkasta oo aanu sheegay in tilmaanta waxaa loogu talagalay in shaandhayso calaamadaha been ah, waxaa had iyo jeer waa dhaqanka wanaagsan in ay meel aad si ka dib markii in formation shumac buul ka dib markii isbedel midab ah.
Tusaale ahaan, haddii aad isticmaalayso wakhti H1 iyo isbedel color ka cas buluug dhexe ee dhismaha ah 8:00 pm laambadda, waa in aad sugto laambadda in dhammeeyey ah formation ay markii laambadda soo socda ka dibna uu bilaabo inuu soo dhiso waa in aad meel aad si haddii isbeddel weli waa la joogo..
Fig.2. Isticmaalka tilmaame Vh in ay ku ganacsan.
Marka ay timaado in ku dhow amarada aad, waa in aad isticmaasho heerarka stop qaadataan in si fudud la gaari ku xiran tahay bartilmaameed aad per ganacsiga. Ka dib markii amarka la xiray mid ka mid ah heerarka joogsiga, aad waa in aanay noqon hunguri in meel ganacsi kale. Gelinayn oo ganacsi waa in si adag ay ku egtahay ugu formation labaad ama saddexaad laambadda ka dib markii isbedel midab ah. Sidaas darteed haddii aad soo daahdo, sug signal soo socda.
Vh Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Vh Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Vh Forex Indicator.mq4?
Copy Vh Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Tusiyaha Vh Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Vh Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousPremium FX Forex Scalper
Next articleSecret Signal Forex Tusiyaha